Vaovao - Ny fitafiana Pinyang dia mamorona atrikasa famokarana miovaova amin'ny fanenomana, fandokoana ary ny zaitra
Ny baiko ho an'ny akanjo roa na telo fotsiny dia azo ekena
Noho ny fidirana an-tsokosoko ao amin'ny “pabrikan'ny rhinoceros” an'i Alibaba dia lasa lohahevitra mafana eo amin'ny sehatry ny indostria indray ny fanovana ny indostrian'ny fanamboarana akanjo. Raha ny marina, satria ny lamaody amin'ny marika iraisam-pirenena dia mirona ho "lamaody haingana", dia nanjary fahaizana tsy manam-paharoa ho an'ny orinasa mpamokatra akanjo mba hahazoana antoka fa afaka mandresy amin'ny fifaninanana masiaka izy ireo hamaly ny fangatahana famokarana karazana maro, batch kely ary valiny haingana.
Amin'ny maha orinasa taloha lamba manana tantara nandritra ny 12 taona, ny manararaotra ny fotoana rehetra omena ny fotoana dia fitaovam-piadiana majika maharitra amin'ny fanambinana. Hatramin'ny taona 2019, ny tetikasa dia novaina, nanomboka tamin'ny fanenomana, fanontana ary fandokoana ho amin'ny fanjairana sy ny zaitra miaraka amin'ny haitao fampahalalana. Androany, ny ora fandefasana ny kaomandin'ny indostria Pinyang dia nampandrosoina hatramin'ny 40 andro ka hatramin'ny 15 andro, ary ny kaomandy miverina haingana (baiko tsy misy 2000) dia natomboka tamin'ny 7 andro. Misaotra an'ity valinteny haingana ity.
Arakaraka ny maha kely ny filaharana no maharatsy azy. Ity no marimaritra iraisan'ny indostrian'ny akanjo. Amin'izao fotoana izao, ny kaomandy an-trano sasany dia 2 na 3 aza, ary 128 ihany ny SKU tokana amin'ny marika fanatanjahantena any ivelany, izay tena takiana amin'ny andiany kely, andiany maro ary fotoana fandefasana haingana. Orinasa mikatsaka fahombiazana, amin'ny famakafakana farany dia ny fanatsarana ny fifaninanana, ny hafa tsy afaka manaiky baiko azonao raisina, io no tombony. Mahatonga ny fampandrosoana lavitra ireo orinasa koa izany. "